Dhibaatooyinka Pulisic sida Griezmann, Hazard - Tababaraha Mareykanka - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Arrimaha Pulisic Sida Griezmann, Hazard - American Boss
Dhibaatooyinka Pulisic sida Griezmann, Hazard - Tababaraha Mareykanka
TELES RELAY 25 October 2019
USA. Agaasimaha Kooxda Qaranka ee Ragga Gregg Berhalter ayaa isbarbar dhig ku sameeyay halganka laga bilaabo Christian Pulisic Chelsea gudaheeda si tartiib tartiib ah ayey uga bilaabataa Antoine Griezmann et Eden Hazard Horyaalka La Liga
Pulisic, 21, wuxuu u saxeexay Chelsea Borussia Dortmund lacag dhan 64 milyan, laakiin kaliya seddex jeer ayuu saftay Premier League ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
- VAR Horyaalka Premier League: Hagaha kama dambaysta ah
- Goorma ayuu furmayaa suuqa kala iibsiga?
- Xilliga jiilaalka ee Premier League: wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Ninka wax dilay ayaa is leh "Aad u jahwareersan" la'aanta waqtiga ciyaarta ee Stamford Bridge, laakiin USMNT Tababaraha Tababare Berhalter ayaa sheegay inay caadi tahay in ciyaartoydu ay qaataan waqti ay kula qabsadaan koox cusub.
Wuxuu ku jiraa cadaadis badan, ayuu yiri. Wuxuu ku jiraa koox weyn. Waxa aan runtii ku jeclahay mowqifkiisa haatan waa in ay jiraan ciyaartoy badan oo da 'yar.
“Waxaa jira tababare maamule caan ka ah la shaqeynta ciyaartoy da 'yarta ah, kaasoo leh falsafaddan fekerka ah ee doonaya inuu naadigan ku dhiso kooxdan hibada leh, wuuna ku habboon yahay qaabkan.
Christian Pulisic wuxuu ku dhibtoonayaa inuu waqtiga badbaadiyo ilaa bilowgii Bundesliga. Sawir uu qaaday Paul Harding / Getty Images
Waxaan qabaa Frank Lampard isku dayey inuu dhaho: waxyaabaha dibedda ah dhab ma ahan, runtii maahan - marka aad falanqeyso qiimaha kala iibsiga, marka aad falanqeyso cidda uu beddelayo, marka aad falanqeyso, waa qofka keliya ee ay soo iibsadeen.
Haddaba ha iloobin in uusan ahayn ciyaaryahanka kaliya ee adduunka ee ay dhibaato ka haysato la qabsashada bilowgii dhaqaaqa. La soco Griezmann ee Barcelona, ​​Hazard kooxda Real Madrid.
Waa ciyaartoydii ugu fiicneyd. [Mohamed] Salah iyo [Kevin] De Bruyne ee Chelsea dabcan. Liisku wuu sii socdaa. Maxaa yeelay isagu isagaa keligiis ahaa
Hazard, oo xagaagan kaga soo biiray Real Madrid Chelsea, ayaa yiri in ay ahayd inuu soo saaro qaab ciyaareed ka fiican kooxda, halka Griezmann yiri wuxuu u baahan yahay waqti uu kula qabsado asxaabtiisa Barcelona ka dib markii uu kaga soo wareegay kooxda Atletico Madrid lacag dhan 120 milyan euro.
Pulisic wuxuu ka tagayaa kursiga keydka si uu u xaadiro Michy Batshuayi si ay u dhaliyaan goolka guusha ee . Guusha 1-0 ee Chelsea oo ku saabsan Ajax ee Champions League.
Isaga oo ka hadlaya shir jaraa'id ka hor safarkooda ay ku tagayaan sabtida kooxda Burnley, Lampard wuxuu ugu hambalyeeyay kabtanka USMNT saameynta uu ku leeyahay dhulka.
“Qaabka uu u ciyaaro, wuxuu u qalmaa boos bilaw ah usbuucyadii la soo dhaafay - laakiin sidoo kale samee kuwa kale,” ayuu yidhi. “Waa wax weyn in saameyn ay leedahay. Wuxuu sameyn doonaa kulankiisii ​​ugu horeysay.
“Masiixi wuu sii xoogaystaa, wuxuu ku sii badanayaa kooxda. Ciyaartoyda halkan yimaada mararka qaar waa inay siiyaan wakhti, gaar ahaan ciyaartoy da 'yar. Si fiican ayuu u ciyaaraa, runti waa nin tartan badan. "
Dhanka kale Pulisic ayaa ku booriyay Sergino Dest inuu matalo USMNT ka dib markii daafaca Ajax uu ku dhawaaqay in uu mar walba arkay isaga oo u ciyaaraya xulka qaranka Holland .
Dest, 18 sano, wali wuu sii wadan karayay inuu daacad u yahay mid ka mid ah xulalka qaramada laakiin Pulisic wuxuu doonayaa in dhallinta da'da yar doorto USMNT.
“Haa, xaqiiqdii, waxaan runtii rajeyneynaa taas,” ayuu Pulisic u sheegay suxufiyiinta. Wuxuu ila joogay xulka qaranka xerada ugu dambeysay waana wax lagu farxo inaan dib u arko mar kale iyo kooxda koowaad ee Ajax maxaa yeelay aad ayuu u da 'yar yahay. Waan ku faraxsanahay isaga. "
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/chelsea/story/3973126/christian-pulisic-woes-similar-to-antoine-griezmanneden-hazard-gregg-berhalter
Koobka Europa League: Guul daradii Nyom iyo Leganes ee ka haray kaalinta koowaad ee group-ka
Europa League: Fai Collins iyo Standard de Liège ayaa guuldarro kale soo gaartay